ဇူလိုင်လ 2014 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2014 » ဇူလိုင်လ
လစဉ်မော်ကွန်း: ဇူလိုင်လ 2014
အဆိုပါ Foundry: တစ်အံ့သြဖွယ်အကြောင်းမှလှူဒါန်း!
အဆိုပါ Foundry (မြောက်မြားစွာဟောလိဝုဒ် Blockbuster များတွင်အသုံးပြုဆုရဆော့ဖ်ဝဲ developer) ခြွင်းချက်စိတ်ထဲ Sherman သပိတ်ကာလီဖိုးနီးယားတွင်တည်ရှိသည်ဒီဂျစ်တယ်အနုပညာအကယ်ဒမီသာရှိပြီး software ကိုပစ္စည်းများလှူဒါန်းခြင်းအားဖြင့်တစ်အလွအကြောင်းမရှိအတွက်အထူးအကျိုးစီးပွားခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ခြွင်းချက်စိတ်ထဲအထူးပြုတဲ့သူ non-အမြတ်ဖြစ်ပါသည် အဆိုပါတောင်းဆိုအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် Autism Spectrum Disorders (ASD) နဲ့ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ဆုံးမဩဝါဒ ပေး. အတွက် ...
IBC 2014 မှာကုသိုလ်ဖြစ် Raffles ပွဲ Host မှ Miller ကအရည်ခေါင်းဆောင်များ (ဥရောပ) Ltd
ဦးဆောင်ကင်မရာပံ့ပိုးမှုကုမ္ပဏီ 60th နှစ်မြောက်အမ်စတာဒမ်, ဇူလိုငျ 31, 2014-Miller ကအရည်ခေါင်းဆောင်များ (ဥရောပ) Ltd, ကင်မရာထောက်ခံမှုဖြေရှင်းချက်တီထွင်ဆန်းသစ်၏ထုတ်လုပ်မှုခေါင်းဆောင်တစ်ဦး၏ဂုဏ်အတွက် Back ကိုပေးသော်လည်း, IBC 2014 မှာကုသိုလ်ဖြစ် Raffles ဖြစ်ရပ် hosting ဖြစ်ပါတယ် (ခန်းမ 11 ယင်းကုမ္ပဏီ၏ 11th နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် 30.D60) ရပ်။ အဆိုပါမိသားစုကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်, သြစတြေးလျပိုင်ကင်မရာထောက်ခံမှုပစ္စည်းကိရိယာများကုမ္ပဏီတစ်ဦးရှမ်ပိန်ပူဇော်ပါလိမ့်မယ် ...
ကို ABS Lighting Grid Upgrade တီဗီ Tacoma များအတွက်စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချပါ, စတူဒီယိုဘက်စုံ A သုံးပြုနိုင်ကိုပိုကောင်းစေ
SEATAC, WA - ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗွီဒီယိုနဲ့အသံစနစ်များကိုပေါင်းစပ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကအဆင့်မြင့်အသံလွှင့်ဖြေရှင်းနည်း (ကို ABS) ကိုအဆင့်မြှင့်ကတည်းကတီဗီ Tacoma, အ Tacoma ၏ City နှင့်ပီယပ်ကောင်တီ, ရေချိုးအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့အစိုးရလက်လှမ်းရုပ်သံလိုင်းများအတွက်ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယိုတစ်ခုတွေအများကြီးတောက်ပနှင့်ပိုပြီးစွယ်စုံဖြစ်ပါသည် စက်ရုံရဲ့အလင်းရောင်ဇယားကွက်။ ကို ABS အားလုံးအက်ဒီဆင်တီထွင်အလင်းအိမ်ဖယ်ရှားနီးပါး 70 Brightline မိုဃ်းလင်းမျှတတဲ့ (5600K) ချောင်းနှင့် LED ကိုသူတို့နှင့်အတူအစားထိုး ...
Audiopole နှင့်ပြင်သစ်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အတူ Wohler ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အစည်းအဝေးအသုံးပြုသူလိုအပ်ချက်များ San Francisco မှာဖျတ်လတ်သွက်လက်စေနှင့်မြန်နှုန်းပြ - ယနေ့ကပြင်သစ်ရုပ်မြင်သံကြား '' တိကျသောစောင့်ကြည့်ရေးလိုအပ်ချက်များအတွက်တစ်ဦးလျှင်မြန်ဖြေရှင်းချက်များကိုဒေသခံမိတ်ဖက် Audiopole နှင့်ပြင်သစ်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အတူပူးပေါင်းခဲ့သည်ဟုကြေညာခဲ့သည် Wohler Technologies က - ဇူလိုင်လ 30, 2014 ။ အတူတူ, သုံးယောက်ကုမ္ပဏီများမှကြောင်းပြင်သစ်နောက်ထပ်အသံစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုဖော်ထုတ် ...
ဒါရိုက်တာအီဗာ Michon ကြံမီဒီယာပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
Los ANGELES- ကြံရာပါမီဒီယာကြော်ငြာအတွက်သီးသန့်ကိုယ်စားပြုများအတွက် Multi-ပါရမီရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာအီဗာ Michon လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဟာသတစ်ခု whimsical အသိနှင့်အတူတစ်ဦးကလိမ္မာအမြင်အာရုံဇာတ်လမ်းတွေ, Michon, ဂီတဗီဒီယိုနှင့်ဖက်ရှင်ရုပ်ရှင်များတွင် Calla, ပန်းရောင်ညျတာ, ခြောက်လနှင့် Rita Liefhebber ကျော်ဆယ်ပါးကဲ့သို့သောဒီဇိုင်နာများများအတွက်အလုပ်အပါအဝင်အဆုံးစွန်သောသူမ၏အလုပ်အတွက်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာဂုဏ်ကျေးဇူးကိုရရှိထားပြီးပါပြီ။ သူမရဲ့ပထမဦးဆုံးအင်္ဂါရပ်-အရှည်ရုပ်ရှင်, မရဏ ...
လူသတ်သမား၎င်း၏ "အဆိုတော်စီးရီး" ကိုဖြည့်စွက်လွန်မြောက်တေးဂီတအဖွဲ့များသီချင်းများ
ထုတ်လုပ်မှုဂီတအထူးကု buzz ခညျြအနှောရှားပါးရဟန်းတော်နှင့် Misun နှင့်အတူလိုင်စင်သဘောတူညီချက်များစီဘီ။ စန်တာမော်နီကာ, Calif. -Killer သီချင်းများ, Pre-ရှင်းလင်းထုတ်လုပ်မှုဂီတ၏စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ဦးဆောင်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, ထွန်းသစ်စအခွက်တဆယ်အပေါ်တစ်ဦးအာရုံနှင့်အတူ၎င်း၏သဲအဆိုတော်စီးရီး၏နယ်ပယ်ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်တိုးချဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီလက်ပံ alt + ရော့ခ်ကနေအလုပ်အပါအဝင် breakout အနုပညာရှင်မှအသစ်အပုဒ်၏နံပါတ်ထုတ်နေသည် ...
Sonnet အခုတော့သင်္ဘောဆုရနယူး xMac Pro ကို Server ကို
နယူး 4U Rackmount ဝင်းလုံလုံခြုံခြုံအိမ်များနောက်ဆုံးထွက်, Mac Pro ကို, သုံး PCIe ချဲ့ကဒ်များမှတစ်ဆင့် Thunderbolt2ချိတ်ဆက်နှင့် 5.25 လက်မမိုဘိုင်းသိုလှောင်ဆင်ချဲ့ Irvine, ကာလီဖိုးနီးယားပေး - ။ ဇူလိုင်လ 29, 2014 - Sonnet ယခုအသစ်မိတ်ဆက် xMac (TM) Pro ကို Server ကိုတင်ပို့နေသည် ပြီး Thunderbolt (TM) 2-to-PCI Express (R), Mac Pro ကို (R) ကွန်ပျူတာများ၏နောက်ဆုံးမျိုးဆက်များအတွက် (PCIe (R)) တိုးချဲ့ရေးစနစ်နှင့် 4U rackmount ဝင်းနှင့်အတူ။ ...
Sohonet ရက်ချိန်း Chuck က Parker အလုပ်အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌမှ
ကုမ္ပဏီကို Global Geographic ကြီးထွားမှုနှင့်စျေးကွက်ချဲ့လန်ဒန်နဲ့လော့အိန်ဂျလိစ် Continues: Sohonet, မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဆက်သွယ်မှုနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ-as-a-Service (IaaS) တွင်ဦးဆောင်ကျွမ်းကျင်သူ, အလုပ်အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌမှ Chuck က Parker ၏ရက်ချိန်းကြေညာဖို့ကျေနပ်ဖြစ်ပါသည် သူ၏ကျွမ်းကျင်မှုသည်၎င်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတိုးချဲ့အားထုတ်မှုအတွက်ကုမ္ပဏီလမ်းပြဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ က Parker ကြံ့များ၏အောင်မြင်သောဝယ်ယူအောက်ပါ Sohonet ပူးပေါင်းမည် ...